IFrentshi yeBhokisi kunye neN nightclub
NgesiFrentshi, isibizo un boîte sithetha "ibhokisi." Leli gama eluncedo kakhulu ukulifaka kwisihlomelo sakho sesigama sesiFrentshi, kodwa sinesinye intsingiselo engacwangciswanga. Makhe sihlolisise indlela ongasebenzisa ngayo i- boîte kunye namanye amagama ambalwa aseFrentshi.
Inkcazo yeNdabuko ye- Unbox
Ngokwesiko, un-boîte isibizo esisetyenziselwa ukubhekisela kwi "bhokisi" okanye nokuba "unako." Okubalulekileyo, lizwi elifanelekileyo lokusebenzisa xa uchaza isitsha esithatha into ethile.
Ukongezelela, isibizo esinesiqulatho esinokuthetha sithi "ityala."
Ibhokisi libizwa ngokuba yi- bwat , enokuba yinto encinci yeentetho zesiNgesi. Ingcinga efanelekileyo yokwenza i- bw izandile. Akunye esisisebenzisa ngesiNgesi, kodwa isetyenziswe rhoqo ngesiFrentshi ngamagama amaninzi afaka i- boi . Ngokomzekelo, isandi esifanayo sisetyenziselwa isenzi se- boire , oku kuthetha "ukusela."
Njengoko unokukrokrela, u- un boxing inokufumaneka kwiintetho ezininzi oza kuzifumana zinceda kakhulu njengoko uhamba kakuhle kwisiFrentshi.
dans la boîte - kwibhokisi
kuthatha into ethile kwi-un boîte - ukuthatha into ebhokisini
chercher dans la boîte - ukujonga kwibhokisi
Nditheté du thon en boîte . - Ndathenga ityhuna yamathanga.
Inkcazo engacwangciswanga ye- Une Boîte
Kanye njengesiNgesi, isiFrentshi yanamhlanje kwaye ingaqhelekanga ifuna ukuboleka amagama ukuchaza enye into. I-boîte yenye yezo magama kwaye ithetha "i nightclub." Omnye unokubona ubudlelwane phakathi kwebhokisi kunye ne-boxy, amagumbi avulekileyo ama-nightclub agqityiweyo, ngoko kunengqiqo.
Sortons en boîte namhlanje ebusuku! - Masihambe kwiklabhu ebusuku!
Le bhokisi iphezulu! - Le khlabhu inkulu!
Kukho inani lamagama athetha "i-nightclub." Ngokomzekelo, unokuva umntu ethi la boîte de nuit okanye iqela le-night . I-discothèque (i-disco) kunye ne -cabaret ingasetyenziselwa abantu be-hotspot ukuya etaweni ebusuku.
Amagama afana ne- Une Boîte
Njengoko ufunda ngakumbi isiFrentshi, uya kubona enye yamagama aqala ngebhokisi . Phakathi kwazo zimbalwa ezibhekisela kwintlungu okanye ukukhubazeka kwamalungu, ngakumbi imilenze xa uhamba. Khumbula ukuba zonke ezi zinto zisetyenziselwa ukubiza amagama.
le boitement - ukuxhamla
i-boiteux - isicefe , i-shaky (isichazi)
À Tout de Suite kunye nezinye iindlela zokuthi "Khangela ngokukhawuleza" ngesiFrentshi
Imifanekiso yesiFrentshi ngeVouloir
I-Faux Amis Eqala Ngo-A
Isikhokelo Sengxoxo Ukunceda Abafundi Abafundi beNgesi "Ngaba Ungubani?"
Kuthetha ukuthini Xa Umfazi Ebizwa ngokuba yi-Cougar?
Ukuthuka kweDanim yethemba
Iimvavanyo zeNyukliya Igalari yezithombe
I-Folk Folk Music Duos
Imigaqo yeVangelism kubantwana abangamaKristu
I-Clark University Admissions
Ukucoceka nomlilo kwiZoroastrianism
Indlela amaNutrients Cycle ngokusebenzisa Ubume bendalo
Iintsikelelo zabantwana kwiSharb